Dowllada Federaalka ah oo ka soo horjeesatey doorashadii Madaxweynaha ee Jubaland.[War-saxaafadeed]
Muqdisho:-Ayadoo Ia llaalinayo dastuurka dalka ee qeexaya qaab-dhismeedka dawlad-goboleedyada dalka ee nidaamka federaaliga ah. Lana dhawrayo geedi socodka dawladaynta ee uu qeexayo Dastuurka Fedaraalaynta Qodobkiisa 49 aad. Ayadoo lagu guda jiro dhamaystirka go’aankii dawladdaha urur goboleedka IGAD ee shirkii Addis Ababa Maajo 3, ee lagu go’aansaday in guddi dhiirigalin oo ka socda wadamada IGAD loo diro magaalada Kismaayo.
Dawladda Faderaalka ah ee Soomaaliya waxay aad uga xuntahay sida loo jaah-wareershay masiirka hogaan ee shacabka Jubooyin ka iyo in Kismaayo looga dhawaaqo labo madaxweyne 15 Maajo 2013. Sidaas daraadeed dawladdu waxay caddeynaysaa inaysan suurto gal u ahayn inay labo madaxweyne u aqoonsato maamulka Jubbaland.
Dawladdu waxay mar kale caddeynaysaa inay soo dhawaynayso dhismaha maamul goboleedyada ku yimaada qaabka sharciga waafaqsan kuna dhisan rabitaanka iyo midnimada shacabka deegaanka.Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay xoojinaysaa hawsha Guddiga Labada Golle ee loo xilsaray wada-xaajoodka iyo dib-u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka. Waxayna maamulada degmooyinka, hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo wax- garadka deegaanka ugu baaqaysaa inay si buuxda la shaqeeyaan gudigaas dawliga ah.